पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेनन् (आहुतिका ६ तर्क)
८ कार्तिक २०७५, बिहीबार १२:३५
यस सन्दर्भमा अर्को दुःखदायी रोचक यथार्थतिर पनि ध्यान खिचौं । पृथ्वीनारायण शाहको आँखाबाट नहेरी नेपालका जनजाति, मधेशी, दलित र कर्णालीपारिका जनताको आँखाबाट हेरियो भने पृथ्वीनारायणको तत्कालीन राज्य र अङ्ग्रेजमा के कति फरक देखिन्छ ? यदि पृथ्वीनारायणले आफ्नो राज्यको अधीनस्थ राख्नुभन्दा अङग्रेजले आफ्नो राज्यको अधीनस्थ बनाएको भए कर्णालीपारि, दलित, मधेशी र जनजातिलाई के फरक पर्थ्यो होला ? कर्णालीपारि आजभन्दा थोरै भए पनि बढी भौतिक विकास हुन्थ्यो होला । जसरी भारतका दलितको आवाज सुन्नसम्म भए पनि सुनेजस्तै नेपाली दलितका आवाज त्यतिबेलै सुन्न सुरु हुन्थ्यो होला । जनजाति र मधेशीले आजभन्दा पक्कै पनि बढी भौतिक विकास र सुविधा पाउँथे होलान् । बदलामा दलित, मधेशी, जनजाति र कर्णालीपारिले अङ्ग्रेजको रैती हुनुपर्थ्यो, कुरा त्यति हो । अनि मधेशी र जनजातिले अझै थप आफ्नो धर्ममाथिको समेत दमन भोग्नुपर्थ्यो । यति न हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौंकेन्द्रित हिन्दू राज्यको अधीनस्थ भएपछि नेपालका दलित, जनजाति, मधेशी र कर्णालीपारिले अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादले गर्ने अत्याचारभन्दा कम के भोगे त ? पृथ्वीनारायणको राज्य दूरीका हिसाबले अलि नजिकबाट आएको, छालाको रङ्ग अलि बढी मिल्ने तर अङ्ग्रेज धेरै टाढाबाट आएको, छालाको रङ्ग धेरै नमिल्ने । यहाँभन्दा बढी फरक के भयो त यथार्थमा ? छातीमा हात राखेर सोच्ने हो भने गुणात्मक रुपमा केही पनि फरक भएन । झन् भौतिक विकास समेत युगौं पछाडि परेर दमित हुनु पर्‍यो ।
त्यतिखेरका सानासाना राज्यका राजालाई प्रगतिको वास्ता थिएन तर पृथ्वीनारायणलाई चिन्ता थियो, त्यसैले एकीकरण नै भन्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ । यो तर्क पनि खासै तथ्यमा आधारित देखिएको छैन किनभने तत्कालीन गोरखा राज्यमा एउटा गतिलो दरबारसम्म थिएन । तर वागमती उपत्यकामा भव्य सभ्यता भइसकेको थियो । त्यति बेलाका कर्णालीपारि र भेरी आसपासका राज्यहरु अनि पूरै लिम्बुवानसम्म शासन चलाउने सेन राज्य गोरखा राज्यभन्दा विकासमा पछि थिए भन्ने प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तब विकास र प्रगतिको चिन्ता अरुलाई थिएन भन्ने तर्कको पुष्टि कसरी हुन्छ ?
आफ्नो प्रगतिको वास्तै थिएन भने आफू मर्न तयार भएर पृथ्वीनारायणको सेनासँग किन लडेका त विजित राज्यका जनताले ? आत्मसमर्पण गरेकाहरु मर्नै पर्दैन भन्ने त थाहा नहुने कुरा भएन । प्रगतितिर वास्तै थिएन भने १८३१ सालमा लिम्बुवान स्वायत्तताको लिखित सम्झौता गरेर मात्र गोरखाली राज्यलाई मान्न तयार किन भयो लिम्बुवान ? आजका अङ्ग्रेजले नालापानीमा केटाकेटी बोकेर लड्ने नेपाली महिलालाई आफ्नो देशको प्रगतिको चिन्तै थिएन भनेर लेखे भने कोही आजको नेपाली त्यो भनाइ स्वीकार गर्न तयार होला ? कदापि हुने छैन किनभने त्यो सत्य कुरा होइन ।
यस्तो प्रश्नले त बलात्कारबाट बच्चा जन्मियो भने बलात्कार भन्न हुँदैन भन्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउँछ । बालविवाह ठीक थिएन भन्नुको मतलब बालविवाहपछि दाम्पत्य जीवन जेनतेन चलाइरहेको जोडीलाई सम्बन्ध विच्छेद नै गराउनुपर्छ भनेको हो ? चरम गरिबीमा पनि गीत गाइन्छ, नाचिन्छ तर त्यो चरम गरिबी ठीक हो ? यस्तो तर्कले त जेजे भए, ती सबै ठीक थिए भन्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ, जुन गलत अवधारणा हो ।